'नयाँ शक्तिले उठाएको विकास र समृद्धिको एजेण्डा नै सबै दलको साझा एजेण्डा बनेको छ' | नयाँ शक्ति नेपाल
- २६ जेठ २०७४
संगठन विभाग संयोजक, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल
नयाँ शक्ति पार्टीको आवश्यकता र यसको औचित्यबारे बताइदिनुहोस् न ?
हामीले नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल नामक पार्टी वैकल्पिक विचार र व्यवहारसहितको वैकल्पिक पार्टीको परिकल्पनासहित गठन गरेका हौं । नेपालमा व्यवहारत: अहिले पनि हेर्दा स्थानीय तहको निर्वाचनको पहिलो चरणमा हामीले प्राप्त गरेको मतलाई मात्रै आधार मान्ने हो भने पनि यसको औचित्य र आवश्यकता झनै बढेर गएको छ । पुराना पार्टीहरुले साम, दाम, दण्ड, भेद सबै प्रयोग गरेर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिस गर्दा पनि जनताले विकल्प खोजेको कुरा स्पष्ट देखिएको छ, त्यसले पनि नयाँ वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ ।
नयाँ शक्ति पार्टी नै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो भन्ने आधारहरु के त ?
विगतमा अधिकार प्राप्तिका निम्ति भनेर हामीले धेरैपटक आन्दोलनहरु गर्‍यौं । अधिकार प्राप्तिका निम्ति भएका आन्दोलनहरुबाट केही अधिकारहरु संश्लेषित अवश्य पनि भएका छन् । बाँकी छुटपुट भएको विषयहरुलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नको निम्ति, देशलाई आर्थिक विकासको प्रणालीमा लैजानको निम्ति र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जीवन प्रणालीमा नेपालीहरुलाई पुर्‍याउनको निम्ति यी एजेण्डाहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएको नयाँ राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता छ । नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालले आर्थिक विकास र समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरेको छ । जुन कुरा अरु पार्टीहरुले गर्न सकिराखेका छैनन् । त्यसैले पनि नयाँ शक्ति पार्टी नै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो ।
हामी विगतका आन्दोलनहरुमा पनि आवद्ध थियौं । ती अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट हामीले केही उपलब्धिहरु प्राप्त गरेका छौं । अब हामी अर्को अध्याय, अर्को चरण र अर्को प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको हुँदा व्यक्तिगत जीवन र नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनको निम्ति फरक प्रकारको अभियानको आवश्यकता छ । त्यो भनेको अब नेपाली जनताको जीवनस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ, आर्थिक आधारलाई समृद्ध पार्नु छ । त्यसका लागि आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिको बाटो हिँड्नुको विकल्प छैन । त्यसै भएर हामी यो अभियानमा सामेल भएका हौं । अरु पार्टीहरु राजनीतिको दिशा बदलिइसकेको अवस्थामा पनि नयाँ दिशाको यात्रा तय गर्न तयार भएका छैनन् । उनीहरु पुरानै ढर्रामा चल्न खोजिराखेका छन् । हामीले नयाँ राजनीतिक बाटो समातिसकेका छौं । त्यसैले पनि नयाँ शक्ति पार्टी नै वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा जनताले त नयाँ शक्तिलाई खासै रुचाएको जस्तो देखिएन नि त ?
खासगरी जनताले स्वभाविक रुपमा स्थानीय चुनाव भएको हुनाले पार्टी विशेषभन्दा पनि स्थानीय स्तरमा काम गर्ने व्यक्तिहरुलाई चुनेको पाइयो । सामाजिक काममा जो सक्रिय छ त्यो छानेको पाइयो । भलै कुनै दलले बढी र कुनै दलले कम जिते होलान । हाम्रो पार्टी भर्खरै स्थापना भएको, कतिपय सन्दर्भमा त परिचय समेत नभइसकेको अवस्थाको पार्टी हो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा जनताले पूरै वेवास्ता नै गरे भन्ने हामीलाई लागेको छैन । विभिन्न जिल्लाको मत परिणामका शृङ्खला हेर्दा हामीलाई जनताले चौथो पोजिसनमा मत हालेको पाइन्छ । त्यसो हुँदा हामी निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
जनताले पहिलो, दोस्रो, तेस्रो शक्ति बनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले हाम्रा समर्थक र शुभचिन्तकले त्यसो नहुँदा चिन्ता जाहेर गर्नु स्वभाविकै हो । तर हाम्रो परिस्थिति त्यस्तो थिएन । निर्वाचन चिन्ह लगायतका विषयहरुमा प्रतिकूल स्थितिको सिर्जना भएको थियो । हामीले सबै ठाउँमा जित्छौं भनेर निर्वाचनमा सहभागी भएको पनि होइन । यो निर्वाचन परिणामप्रति म धेरै असन्तुष्ट छैन । रसुवा, गोरखा, काभ्रे, ललितपुरलगायतका केही ठाउँहरुमा साथीहरु विजयी बन्नुभएको छ । साथै यो निर्वाचनमा हामीले उम्मेदवार उठाउने र पार्टीलाई तलसम्म लैजाने प्रमुख उद्देश्य पनि थियो । त्यो पूरा भएको छ ।
संख्याको हिसावले भन्दापनि जनताको मन जित्ने हिसावले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हो । कतिपय अवस्थामा हामी पूर्ण रुपमा चुनाव जित्छौं नै भनेर पनि सहभागी भएका थिएनौं । हामी धेरै ठाउँमा पहिलो, दोस्रो हुन्छौं भनेका पनि थिएनौं । त्यो अनुसार उम्मेदवार उठाएका पनि होइनौं । हामीले जनताको मन जित्ने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यस अर्थमा हामी सफल भएका छौं । त्यसैमा हामी सन्तुष्ट पनि छौं । हामीले प्रारम्भिक चरणको समीक्षा गर्दा झण्डै २२ सय पदहरुमा हाम्रा साथीहरुले उम्मेदवारी दिनुभएको थियो, त्यसमध्ये ६३ पदहरुमा विजयी भएका छौं । यो राम्रो सुरुवात हो । धेरैजस्तो पार्टीहरु चुनावमा हराएका छन् । हामी हराएको अवस्था छैन । विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा साथीहरु उभिनु भएको छ । त्यसले पनि नयाँ शक्ति पार्टी जनताको मनमा छाएको छ, हामी सन्तुष्ट छौं ।
आसन्न असार १४ को दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तपाईहरुले कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?
पहिलो चरणको चुनावको समीक्षा हामीले तीनवटा विषयमा गरेका थियौं । बहुदलीय व्यवस्थामा इतिहासमा कहिल्यै नभएको चुनाव लड्छौं भन्ने पार्टीले चुनाव चिन्ह नपाउनुजस्तो विडम्बनापूर्ण घटना हामीले व्यहोर्नु पर्‍यो । त्यसपछि हामीले संघीय समाजवादी फोरमसँग चुनावी तालमेल गरेर फोरमको चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा सहभागी भयौं । पहिलो चरणमा जे जति सफलता प्राप्त भयो, त्यसबाट हामी सन्तुष्ट नै छौं । अब दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामी थप तयारी गर्दैछौं । अहिले हामीलाई केही बढी समय पनि छ । त्यसो भएको हुनाले दोस्रो चरणको निर्वाचनमा हामी पहिलो, दोस्रो हुन्छौं त भन्दैनौं । तर राम्रो परिणाम आउने कुरामा हामीलाई विश्वास छ । हाम्रो तयारी पनि त्यसैअनुरुप भइरहेको छ ।
अलिकति प्राविधिक कुरा पनि गरौं, पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतपत्र धेरै बदर भएको निर्वाचन आयोगको तथ्यांकमा देखिन्छ । नयाँ शक्ति पार्टीले बदर मतको संख्या कम गराउन मतदाताहरुलाई भोट हाल्न सिकाउनेतिर ध्यान दिनुभएको छ कि छैन ?
हामीले सकेसम्म मतदाताहरुलाई आफ्नो उम्मेद्वारको चिन्ह पहिल्याएर मात्रै मतदान गर्न भनेका छौं र त्यसै अनुरुप प्रशिक्षित पनि गरिएको छ । पहिलो चरणमा त हामीसँग खासै समय नै थिएन । अन्य दलहरुले पनि मतदाता शिक्षामा खासै ख्याल गरेको पाइएन । निर्वाचन आयोगले पनि त्यसै अनुरुप मतदाता शिक्षा दिन सकेन । दोस्रो चरणमा हामीले नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट सकेसम्म मत बदर नहुनेगरी मतदाताहरुलाई प्रशिक्षित गर्नेछ । अर्को मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो भने उम्मेदवारको चिन्ह र फोटो समेत सँगै राखिएको मतपत्र तयार गर्ने हो भने जनताले उम्मेदवारलाई चिनेको आधारमा पनि मतदान गर्न सक्नेछन् । अहिलेको निर्वाचनमा यो कुरा सम्भव हुँदैन । आगामी निर्वाचनहरुमा यो विधि अपनाइयो भने जनताले चाहेको र रोजेको उम्मेदवारलाई मतदान पनि गर्न पाउनेछन । हाम्रो मतपत्र यति लामो र झन्झटिलो छ कि सचेत मतदाता समेत झुक्किन सक्छन् । अर्कोतिर उम्मेद्वारी दर्ता हुनुअगावै नै निर्वाचन आयोगले मतपत्र छाप्यो । जसका कारणले आधा भन्दा धेरै चिन्हहरु त उम्मेद्वारविनाका चिन्ह थिए मतपत्रमा । जसले मतपत्र पनि ठूलो भयो, उम्मेद्वार नभएको चिन्हमा भोट गएर भोट खेर पनि गयो । त्यसो हुनाले यसप्रकारको भद्दा मतपत्र खारेज गरेर चाहेको व्यक्तिलाई मतदान गर्न पाउने र प्रष्ट चिनिने मतपत्रको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
तपाईं नयाँ शक्ति पार्टीको संगठन विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ । अब चारवटा प्रदेशमा निर्वाचन हुँदैछ । संगठन विभागको प्रमुखको हैसियतले नयाँ शक्ति पार्टीलाई निर्वाचनमा कसरी परिचालित गर्दै हुनुहुन्छ ?
हामीले खासगरी केही साथीहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तयारीका लागि जाने भनेर निर्णय गरेका छौं । हामीले प्रदेश नम्बर पाँचका साथीहरुसँग छलफल सकेर आएका छौं । केही दिनपछि एक/दुई नम्बर प्रदेशमा पनि जाने तयारी छ । हामीले यसअघि निर्वाचन सकिएका ठाउँका साथीहरुले, सम्भव भएसम्म ६ नम्बरका साथीहरुले ७ नं. प्रदेशमा सहयोग गर्ने, ४ नम्बरका साथीहरुले ५ नम्बर प्रदेशमा सहयोग गर्ने र ३ नम्बरका साथीहरुले १ र २ नम्बर प्रदेशमा सहयोग गर्ने भनेका छौं । तर स्थानीय स्तरको चुनाव भएको हुनाले सम्बन्धित क्षेत्रको मानिसको नै बढी भूमिका हुने हुनाले बाहिरबाट गएर सहयोग गर्ने अवस्था कम हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले हामीले स्थानीय स्तरमै रहेका साथीहरुलाई बढी परिचालित गर्नेछौं ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा तालमेलको कुरा कसरी अगाडि बढ्ला ? तपाईंहरुले संघीय समाजवादी फोरमसँग मात्रै तालमेल गर्नुहुन्छ कि अन्य शक्तिहरुसँग पनि तालमेल गर्ने तयारी गरिरहनु भएको छ ?
संघीय समाजवादी फोरमसँग बाहेक पनि हामीले अन्य शक्तिहरुसँग कांग्रेस, एमाले माओवादी केन्द्रसँग पनि स्थानीय स्तरमा तालमेलबारे सामान्य कुरा गरेका छौं । निर्वाचनमा कोसँग तालमेल गर्ने र कोसँग नगर्ने भन्ने हाम्रो खास त्यस्तो केही नीति छैन । विगतमा राजतन्त्रको पक्षमा बोल्ने शक्तिहरुसँग फरक दृष्टिकोण बनाएका छौं हामीले । त्यसभन्दा बाहेक स्थानीय स्तरमा पछिल्ला परिवर्तनसँग जोडिएका शक्तिहरुसँग तालमेल गर्दा हुन्छ भन्ने सामान्य सोच हो । असार २ गते निर्वाचन आयोगमा मनोनयन गर्ने दिन भएको हुनाले त्यसभन्दा अगाडि तालमेलबारे विभिन्न जिल्लाहरुमा छलफल चलिरहेको छ । कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरुसँग पहाडी क्षेत्रमा र मधेसवादी शक्तिहरुसँग मधेस क्षेत्रमा तालमेलबारे छलफल चलिरहेको छ । संघीय समाजवादी फोरमसँग एउटै चुनाव चिन्हमा तालमेल गरिरहेको छौं भने लोकतान्त्रिक फोरमसँग पनि यसबारेमा छलफल भइरहेको छ ।
तालमेलले पार्टी संगठनहरुलाई तत्काल लाभ देखिए पनि राजनीतिक रुपमा नोक्सान हुन्छ भन्छन् नि, तपाईंहरुलाई के लाग्छ ?
यो ठीकै विषय हो । तालमेल त्यति सुखद, राम्रो र फलदायी देखिएन । तर पनि ठूला पार्टीहरुले समेत आफ्नो अस्तित्वका लागि तालमेल गरेको हुँदाखेरी हामीले पनि तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने लागेको हो । कतिपय पार्टीहरु स्थानीय रुपमा तालमेलप्रति प्रयत्नरत छन् । तरपनि तालमेल भन्दा जनताको बीचमा आफ्नो एजेन्डा लिएर जाँदा सबैको आ–आफ्नो हैसियत प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । त्यसो गर्नु नै मौलिकता हुँदोरहेछ । पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै हेर्ने हो भने चितवनमा माओवादी र कांग्रेस तथा काठमाडौंमा राप्रपा र एमालेको तालमेल जनताले रुचाएनन् र खासै ती पार्टीहरु पनि सन्तुष्ट बन्ने अवस्था देखिएन । त्यसकारणले यस्तो अवस्था नहोस् भन्नका लागि तालमेल गर्नु जरुरी छैन । तर निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर जाने कुरा भने फेरि सही छ । हामीले त्यसको अभ्यास सुरु गरेका छौं, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल र संघीय समाजवादी फोरमले । यो कुरा भारत र युरोपमा समेत प्रचलनमा छन् । अस्थायी रुपमा गरिने तालमेलले सुखद परिणाम दिँदैन । कि गठबन्धन बनाएर तालमेल गर्ने, कि भने आफ्नो मौलिकतामा जे एजेन्डा छन् ति लिएर विना तालमेल पनि चुनावमा जान सकिन्छ । त्यसो गर्दा पनि ठीकै हुन्छ भन्ने कुरा पहिलो चरणको निर्वाचनले देखाएको छ ।
पहिलो चरणको निर्वाचनअघि नयाँ शक्ति पार्टीले चुनाव चिन्ह आँखा भनेर प्रचारप्रसार गर्‍यो तर निर्वाचन आयोगले आँखा चुनाव चिन्ह नदिएपछि तपाईंहरुले संघीय समाजवादी फोरमसँगको सहकार्यमा फोरमको मशाल चुनाव चिन्ह लिएर निर्वाचनमा जानुभयो । पहिलो चरणको निर्वाचनमा त्यसले जनतामा कुनै समस्या पार्‍यो कि पारेन ?
पहिलो चरणको निर्वाचनमा केही न केही समस्या परेको हामीले पायौं । खासगरी यसअघि पहाडमा यो चिन्ह लिएर चुनाव लडेको हामीले पाएनौं । संघीय समाजवादीले पहिले छाता चुनाव चिन्ह लिएर लडेको हो । केही ठाउँमा पार्टीको नाम नै मसाल छ । त्यसले पनि केही कन्फ्युजन पैदा गर्‍यो । अर्को कुरा यो चिन्हले मधेसबाट बढी मत प्राप्त गरेको हुँदाखेरी पहाडका जनताले यो त मधेसको चिन्ह हो भनेर अपनत्व गर्न सकेनन् । यद्यपि हामीले यी कुराहरुमा जनतालाई बुझाउने कुरामा कमीकमजोरी रह्यो । मधेस लगायत अन्य धेरै ठाउँमा चुनाव हुन बाँकी नै रहेको हुँदा दोस्रो चरणमा आउँदा राम्रै परिणाम आउला भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि हामीले हाम्रो पार्टीको मौलिकतासहितको आँखा चिन्ह भनेका थियौं, पहिलो चरणको चुनाव सकेर अर्को चरणको चुनाव प्रचारमा जाँदा समेत तपाईंहरुको चुनाव चिन्ह त आँखा होइन भनेर सोधिरहँदा र आँखा चुनाव चिन्ह नपाउँदा हाम्रो पार्टीलाई ठूलै असर गरेको पाएका छौं ।
सबै ठाउँमा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरमबाट साझा उम्मेदवार हुन्छन भन्ने आइरहेको छ । यदि सबै ठाउँमा साझा उम्मेदवार हुन सकेनन भने नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट छुट्टै उम्मेदवारी होला त ?
हामीले सकेसम्म सबै ठाउँमा साझा उम्मेदवारी नै दिने भनेका छौं । जहाँ नयाँ शक्तिका साथीहरु हुनुहुन्छ, त्यहाँ नयाँ शक्तिकै साथीहरु उठ्नुहुन्छ । जहाँ संघीय समाजवादी फोरमका साथीहरु हुनुहुन्छ, त्यहाँ उहाँहरु मात्रै उठ्नुहुन्छ । जहाँ दुुवै पक्षका साथीहरु छन् त्यहाँ सहकार्य गरेर नै चुनावमा जाने कुरा हुन्छ । यद्यपि हामीले सबै ठाउँका उम्मेदवारहरुलाई साझा उम्मेदवारकै रुपमा मानेका छौं । खाली मनोनयन पत्र दर्ता गर्ने बेलामा कुन पार्टीको उम्मेदवार हो भन्ने कुरा त्यहाँ प्रष्ट पारिन्छ । मनोयनय पत्र चाहिँ एउटै हुन्छ । हामीले हाम्रा दुई पार्टीका उम्मेदवारहरुलाई साझा उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
साझा उम्मेदवार हुन नसक्ने ठाउँमा स्वतन्त्र रुपमा पनि उम्मेदवारी दिने हो र ? एक नम्बर प्रदेशका केही जिल्लामा यस्तो पनि चर्चा चलेको छ त ?
हामीले सकेसम्म स्वतन्त्र उम्मेदवार नगर्नुस भनेर निर्देशन दिएका छौं कुरा मिल्दासम्म । यद्यपि हाम्रो पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम एकीकरण भएर एउटै भइसकेको अवस्था त छैन । तैपनि संयुक्त भएर जाने भनेपछि राजनीतिक इमान्दारिताको लागि पनि दुवै पक्षले एक अर्कोको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर एउटै चुनाव चिन्ह र एउटै मनोनयनपत्र बनाइसकेपछि स्वतन्त्र रुपमा निर्वाचनमा जाने कुरा हुँदैन । प्रदेश नम्बर एक र सातमा मिलेको छ । प्रदेश नम्बर दुई र पाँचमा मिलाउन बाँकी छ । दुइवटै पार्टीका निर्वाचन परिचालन कमिटिका साथीहरुसँग हामी निरन्तर वार्तामा छौं । कुन गाउँपालिका र कुन नगरपालिकामा ठोस रुपमा कुरा गर्दा हामी जित्न सक्छौं त्यसबारेमा पनि हामी निरन्तर बहस र छलफलमा छौं ।
नयाँ शक्ति पार्टीले उठाइरहेको आर्थिक समृद्धिको नारा र एजेन्डा अरु पार्टीले पनि उठाउन थालेका छन् । नयाँ शक्ति र अरुमा अब फरक के ?
हामी त खुशी छौं । हामीले पार्टी गठन गर्दादेखि नै आर्थिक विकास र समृद्धिको नारा उठायौं । हामीले त छुट्टै आर्थिक दस्तावेज, विकास र समृद्धिको प्रारुप, पनि तयार पारेका छौं । पहिले कसैले पनि यसतर्फ ध्यान दिएका थिएनन् । हामीले यस विषयलाई अलि विशेष रुपमै उठायौं । यो जनजनको नारा बन्यो । जब यो नारा जनजनको बन्यो तब ठूला पार्टीहरुले पनि आफ्ना पहिलेका नारा छाडेर आर्थिक समृद्धिकै विषय उठाइरहेका छन्, हामीले उठाएको कुरा सबै दलहरुले प्रमुखताका साथ उठाउनु भनेको व्यक्तिगत रुपमा पनि खुशीकै कुरा हो । पहिलोपटक हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा सहभागी भएको हो, यो निर्वाचनमा जुन पोजिसनमा भएपनि अबको देशको निकास भनेको आर्थिक समृद्धिको बाटो नै हो । हामीले ७, १५ र २५ वर्षको विकासको खाका जो कोरेका छौं त्यही विषयमा अरु पार्टीहरु आउनु भनेको नयाँ शक्तिको मौलिकता पुष्टि भएको मैले महसुस गरेको छु ।
अन्त्यमा, तपाईं पार्टीको संगठन विभाग संयोजक हुनुहुन्छ, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा आम जनता र पार्टी संगठनलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
खासगरी निर्वाचनमा दृढतापूर्वक लाग्न पार्टी र आम जनतालाई आग्रह गर्दछु । एक वर्षमा नै धेरै ठूलो परिणाम आउँछ कि भनेर कसैले भनेको थियो भने पनि त्यो सही होइन । हामीले वैकल्पिक धारा भनेर सुरुवात गरेका छौं, यो बन्छ र यसलाई बनाउनुपर्छ । अरु पार्टीहरुले जुन तरिका अपनाएर जनतालाई भ्रमित पारेका छन् ती सबै कुरालाई चिरेर पार्टीलाई सशक्त बनाएर जानुपर्छ । यस सवालमा दृढ रहन पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरुलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।